Genesisi 45 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
45 Josefa akanga asingachakwanisizve kuzvidzora pamberi pavose vakanga vamire pedyo naye.+ Naizvozvo akashevedzera kuti: “Budisai vanhu vose muno mandiri!” Josefa paakazvizivisa kuvana vababa vake hapana mumwe munhu akanga akamira naye.+ 2 Zvino akatanga kuchema kwazvo achisvimha misodzi,+ zvokuti vaIjipiti vakazvinzwa uye imba yaFarao yakazvinzwa. 3 Josefa akazoti kuvana vababa vake: “Ndini Josefa. Baba vangu vachiri vapenyu here?” Asi vana vababa vake havana kukwanisa kumupindura zvachose, nokuti vakanetseka pamusoro pake.+ 4 Naizvozvo Josefa akati kuvana vababa vake: “Ndapota, swederai pedyo neni.” Ivo vakabva vaswedera pedyo naye. Iye akabva ati: “Ndini Josefa mwana wababa venyu, wamakatengesera kuIjipiti.+ 5 Zvino musarwadziwa+ uye musazvitsamwira nokuti makanditengesera kuno; nokuti Mwari akandituma mberi kwenyu kuti ndichengetedze upenyu.+ 6 Nokuti rino ndiro gore rechipiri renzara panyika,+ uye kuchine mamwe makore mashanu akuchange kusina nguva yokurima kana kukohwa.+ 7 Naizvozvo Mwari akandituma mberi kwenyu kuti muve nevachasara+ panyika uye kuti akuchengetei muri vapenyu nokukuponesai kwazvo. 8 Zvino hamusi imi makandituma kuno,+ asi akanga ari Mwari wechokwadi, kuti andigadze kuva baba+ kuna Farao uye ishe weimba yake yose uye souyo ane simba panyika yose yeIjipiti. 9 “Kurumidzai kuenda kuna baba vangu, muti kwavari, ‘Zvanzi naJosefa mwanakomana wenyu: “Mwari akandigadza kuti ndive ishe weIjipiti yose.+ Uyai kwandiri. Musanonoka. 10 Mugare munyika yeGosheni,+ murambe muri pedyo neni, imi nevanakomana venyu nevanakomana vevanakomana venyu nemakwai enyu nemombe dzenyu nezvose zvamunazvo. 11 Ndichakupai zvokudya ikoko, nokuti kuchine mamwe makore mashanu enzara;+ kuti imi neimba yenyu nezvose zvamunazvo murege kuva nourombo.”’ 12 Maziso enyu nemaziso omunun’una wangu Bhenjamini ari kuona kuti muromo wangu ndiwo uri kutaura nemi.+ 13 Naizvozvo udzai baba vangu nezvokukudzwa kwangu kwose muIjipiti nezvose zvamaona; kurumidzai muuye nababa vangu kuno.” 14 Akabva awira pamutsipa waBhenjamini munun’una wake, akasvimha misodzi, uye Bhenjamini akasvimhira misodzi pamutsipa wake.+ 15 Akatsvoda vakoma vake vose, akasvimhira misodzi pavari,+ uye pashure paizvozvo vana vababa vake vakataura naye. 16 Zvino mashoko acho akanzwika kumba kwaFarao, zvichinzi: “Vana vababa vaJosefa vauya!” Zvakava zvakanaka kuna Farao nevashandi vake.+ 17 Naizvozvo Farao akati kuna Josefa: “Iti kuvana vababa vako, ‘Itai izvi: Takudzai mhuka dzenyu dzinotakuriswa zvinhu, muende mupinde munyika yeKenani,+ 18 mutore baba venyu nedzimba dzenyu muuye kuno kwandiri, kuti ndikupei zvakanaka zvenyika yeIjipiti; uye muve nechikamu chakaorera chenyika yacho.+ 19 Iwe unorayirwa kuti:+ “Itai izvi: Torai ngoro+ panyika yeIjipiti dzokuti mutakure vana venyu nemadzimai enyu, uye mukwidze baba venyu mune imwe yacho, muuye kuno.+ 20 Maziso enyu ngaarege kunzwira urombo midziyo yenyu,+ nokuti zvakanaka zvenyika yose yeIjipiti ndezvenyu.”’”+ 21 Pashure paizvozvo vanakomana vaIsraeri vakaita saizvozvo, Josefa akavapa ngoro maererano nokurayira kwaFarao uye akavapa mbuva+ yorwendo. 22 Akapa mumwe nomumwe wavo jasi rokuchinja,+ asi akapa Bhenjamini masirivha mazana matatu nemajasi mashanu okuchinja.+ 23 Akatumira baba vake zvinotevera: mbongoro gumi dzakanga dzakatakura zvinhu zvakanaka zveIjipiti nembongoro hadzi gumi dzakanga dzakatakura zviyo nezvokudya nezvokurarama nazvo zvababa vake zvorwendo. 24 Nokudaro akarega vana vababa vake vachienda, ivo vakaenda. Asi iye akati kwavari: “Musanetsana parwendo.”+ 25 Zvino vakabuda muIjipiti vakazosvika munyika yeKenani kuna Jakobho baba vavo. 26 Vakabva vavaudza vachiti: “Josefa achiri mupenyu, uye ndiye ane simba panyika yose yeIjipiti!”+ Asi mwoyo wavo wakarukutika, nokuti havana kutenda zvavaitaura.+ 27 Pavakavaudza mashoko ose aJosefa aakanga avaudza, vakaona ngoro dzakanga dzatumirwa naJosefa kuti dzivatakure, baba vavo Jakobho vakatanga kuwanazve simba.+ 28 Israeri akabva ati: “Zvakwana! Josefa mwanakomana wangu achiri mupenyu! Aa, regai ndiende ndinomuona ndisati ndafa!”+